“Badhtamaha Jigjiga Halagu Deldelo Cabdi Iley” Siyaasi Faarax Macallin | Haldoor News
“Badhtamaha Jigjiga Halagu Deldelo Cabdi Iley” Siyaasi Faarax Macallin
August 5, 2018 - Written by admin
Nairobi(Haldoornews):-Siyaasiga Faarax Macallin Dawaar ayaa ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley), oo hadda mustaqbalkiisa siyaasaddeed laga walaacsan yahay halka uu ku danbeyn doono.
Faarax Macallin oo ah siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa dareenkiisa isaga oo ka hadlaya siyaasadda iyo maamulka Cabdi Iley waxa uu soo jeediyey in la deldelo Cabdi Iley weliba badhtanka magaalada Jigjiga.
“Kawaanlaha Jigjiga waa in uu maalin ku yeeshaa Maxkamadda. Waxaan rejeynayaa in ay ku deldelaan badhtamaha Jigjiga si ay farriin xoog leh ugu noqoto kuwa laga yaabo in ay ku tacadiyaan bani aadamka. Waxa uu sababay in maxaabiista ay saxaradooda/xaarkooda cunaan halka uu kuwo bandanna ay gaajo u dhinteen. Dr Abiy muddo badan uu sugayey in uu Iley iyo xulafadiisa cadaaladda horkeenno.” ayuu qoraalka ku yidhi Siyaasi Faarax Macallin.